होटल संघ र आवास संघका व्यवसायीको मत पोखरेललाई पक्का ! – हिमाली आवाज
२०७८ श्रावण १२ गते ,मंगलवार
होटल संघ र आवास संघका व्यवसायीको मत पोखरेललाई पक्का !
हिमाली आवाज	 २०७७ पुष २१ गते ,मंगलवार १०:२८ मा प्रकाशित
हिमाली आवाज । पश्चिमान्चल होटल संघ र गण्डकी जग्गा तथा आवास विकास संघले पोखरा उद्योग वाािणज्य संघको आसन्न निर्वाचन अन्तर्गत उपाध्यक्ष (वाणिज्य) पदमा अर्जुन पोखरेललाई सघाउने भएका छन् । उनीहरुले आधिकारिक निर्णय गरेर नै पोखरेललाई सघाउने निर्णय गरेका हुन् ।
पोखरेल होटल संघको सदस्य हुन् भने आवास विकास संघको पुर्व अध्यक्ष हुन् । यस्तै युवा उद्यमी मन्चले समेत पोखरेललाई नै मतदान गर्न मातहतका मतदाताहरुसँग आग्रह गरेको छ ।
आफ्नो संस्थाका समस्या समाधानका लागि संस्थाकै सदस्यलाई नेतृत्वमा पु¥याउनुपर्ने भन्दै विभिन्न संघ संस्थाले पोखरेललाई निर्वाचित गराउन अपिल गरेको छ । पोखरेल हाल पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको महासचिव पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।
२०७१ देखि ०७३ सम्म पोखरेल कार्यसमिति सदस्यमा निर्वाचित हनुभयो भने २०७३ देखि ०७५ सम्म उपमहासचिवको रुपमा काम गर्नुभयो ।
ग्रामिण पर्यटन विकासको लागि उनले अभियानकै रुपमा विभिन्न काम गरेका छन् भने संस्थागत रुपमा उद्योगी व्यवसायीका हक हितका लागि आवाज बुलन्द पार्दै आउनुभएको छ । पोखरेल नारायण कोइराला प्यानलबाट वाणिज्य उपाध्यक्ष पदको उम्मेदवार हुनुहुन्छ ।
नेपालमा असोज दोस्रो सातादेखि तेस्रो लहर आउने सक्ने प्रक्षेपण
पर्यटन र कृषि गण्डकी प्रदेश समृद्धिका आधार : मुख्यमन्त्री पोखरेल
एनआरएन हङकङका अध्यक्ष टीका गुरुङको पहलमा सार्दिखोला स्वास्थ्य चौकीलाई अक्सिजन कन्सनट्रेटर हस्तान्तरण
नेल्टाको कृत्रिम गर्भाधान तालिमको पोखरामा समापन
भैँसी किन्न पोखरा महानगरले कृषकलाई दियो रु १७ लाख अनुदान
मन्त्री, प्रमुख सचिव र सचिवलाई गण्डकीका मुख्यमन्त्रीको १७ बुँदे निर्देशन(पूर्ण पाठ सहित)